Allgedo.com » Musuq-maasuqa Qarsoon iyo kan muuqdo keebaa halis badan – W.Q. Ibrahim Aden Shire
Print here| By: allgedo.com: Friday, April 14, 2017 // u Jawaab
Bal aan is garab dhigno qof ka shaqeeyo xafiis dowladeed oo laaluush ku qaato shaqadii uu mushaarka ku qaadanayay iyo macalin maalin walba hal saac iyo ka badan lunsado. Kan hore, xigta uu qaatay waxay dib ugu noqon dalka. Waxaa laga yaabaa inuu caruurta dhar, cunto ama wax kale oo daruuri ah oogu soo iibsado. Waxa ugu xun oo uu ku samayn karo waa inuu qaad ku iibsado iyaduna dad unbaa ka faaiidi. Sidoo kale dhibkiisa ilaa xad waa mid kooban oo aan lahayn saamayn xun oo raad fog reebto. Balse macalinka lusaday waqtiga, musuqiisu waa mid aan sinaba faa’iido ku lahayn. Ma jiro dhaqaalo uu kordhinayo. sidoo kale dhibkiisu waa mid cirib danbe xun u leh dadka iyo dalkaba. Waxaa la mid ah dhaqtar aan shaqadiisa imaan iyadoon bukaanku tuban yahay isbitaalka hortiisa lagana yaabo inay qaar u geeriyoodaan la’aantiis. Waqtigu waa lacag sidaa darteed waxay xadayaan waxaa ku jiro lacag labo dhinac ah: mushaar ay qaateen iyagoon shaqo hufan aan qabanin iyo waqtigii dad-weynaha oo ay xadeen.
Wareegtadi kasoo baxday xafiiska waraysul-wasaaraha dhawaan ee lagu cadaynayay waqtiyada shaqada ee shaqaalaha dowlada waa mid tusayso inuu jiro baraarug ku aadan arintaan. Hadii sida loo qoray loo dhaqan galiyo, waxay wax badan ka badali doontaa wax soo saarka shaqaalaha dowlada. Laakiin waxaad moodaa wareegtadu inay la hadlaysay kaliya kuwa ka shaqeeyo xafiisyada dowlada ee aanay xisaabta lagu darin kuwa hayo adeega dad weynaha. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in la balaariyo la xisaabtanka shaqaalaga dowlada nooc walba oo ay yihiinba.
Ujeedka qoraalkaan maahan inaan u qiil bixiyo laaluush qaadashada iyo boobka hantida dad-weynaha balse waxaan ooga gol leeyahay in lagu baraarugo inuu jiro mid kasii dhib badan oo nagu habsaday hadana aynan dhib u arag. Waxaa muhiim inaan fahamno in waqti la-lunsaday uu la mid yahay lacag la-lunsaday kana sii dhibaato badan yahay marar badan.
Xadida waqtigu waa xaraam wuxuuna wasaqaynayaa mushaarki aan qaadan lahayn. Wuxuu keenayaa inaan caruurta ku korsano xoolo aan ku kasbanay qaab xaraam ah taasina waxay horseedi caro Eebe ka sokow inay ubadkeenu noqdaan kuwa caasiyaal ah oo aan intifaac lahayn. Wuxuu sidoo kale dib dhac ku yahay dalkeena wuxuuna baabi’inayaa jiritaanka bulshada iyo dhaqanka suuban.